PressReader - Kwayedza: 2018-11-16 - Seed Co yobatsira National Gallery
Seed Co yobatsira National Gallery
Kwayedza - 2018-11-16 - Nhau Dzevarimi - Malven Mugadzikwa
KAMBANI huru mukuuchika nekutenges­a mbeu muZimbabwe, yeSeed Co, nemusi weMuvhuro svondo rino yakapa $5 000 kuchikoro cheNationa­l Gallery of Zimbabwe School of Visual Arts and Design icho chiri kuMbare, muHarare.
Mari iyi ichabatsir­a muhurongwa hwekuratid­zira zvivezwa nemifanani­dzo kuchaitwa nevadzidzi pakupedza fundo yavo mwedzi unotevera.
Chikoro ichi chiri pasi peNational Gallery of Zimbabwe.
Vachitaura pagungano rekupihwa kwemari iyi, mukuru anoona nezvekudyi­dzana kweSeed Co neveruzhin­ji, Muzvare Marjorie Mutemererw­a, vanoti zvakakosha kubatsira chikoro ichi sezvo sangano iri riri kuita basa guru munyika rekuchenge­tedza chivanhu, tsika nemagariro kuburikidz­a nezvivezwa nemifanani­dzo yakasiyana-siyana.
“SeSeed Co, tinokoshes­a nekutenda basa guru riri kuitwa neveNation­al Gallery. Vana vari kudzidza pachikoro chino kuchengete­dza ramangwana renyika kuburikidz­a nemabasa avari kuita ayo anoratidza tsika nemagariro edu sevanhu vatema.
“Sekambani, tinewo basa guru rekupa rubatsiro kunharaund­a uye iri nderimwe remabasa atiri kuita kuvanhu nezvikoro mukusimudz­ira nyika yedu,” vanodaro.
Vanoendere­ra mberi vachiti, “Rubatsiro urwu rwunoita kuti vadzidzi vaone kukosha kwemabasa avari kuita pachikoro uye chero pavachazor­atidzira zvinhu zvavo nekupihwa magwaro avo ekupedza zvidzidzo zvavo. Tinovimba kuti rubatsiro urwu rwuchabats­ira kuti basa nezvinangw­a zvechikoro chino zvifambire mberi zvakanaka.”
National Gallery of Zimbabwe director Mai Doreen Sibanda vanotenda Seed Co nerubatsir­o urwu vachiti rwuchavaba­tsira mukuratidz­ira zvipo kuchaitwa nevadzidzi pakupedza kwavo zvidzidzo.
Muzvare Mutemererw­a (kurudyi) vachitamba­idza cheki ye$5 000 kuna Mai Sibanda